CHII CHINONZI RAM? | RANDOM ACCESS MEMORY TSANANGUDZO - NYORO
Chii chinonzi RAM? | Random Access Memory Tsanangudzo
RAM inomirira Random Access Memory , chinhu chakakosha kwazvo chemagetsi chinodiwa kuti komputa iite, RAM inzira yekuchengetedza iyo CPU inoshandisa kuchengeta iyo yazvino inoshanda data kwenguva pfupi. Inogona kuwanikwa mumarudzi ese emakomputa madhijitari akadai seMaharafoni, maPC, mapiritsi, maseva, nezvimwe.
Sezvo iyo ruzivo kana dhata ichiwanika narini, nguva dzekuverenga nekunyora dzinokurumidza zvakanyanya kana dzichienzaniswa nedzimwe nzira dzekuchengetedza dzakadai se CD-ROM kana Hard Disk Drives uko iyo data ichengetwa kana kudzoreredzwa zvakateedzana zvinova zvinononoka kuita sechigumisiro chekutora kunyangwe diki dhata rakachengetwa pakati pekuteedzana isu tichafanirwa kupfuura neese akateedzana.
windows 10 gadziridza nyaya dzine mutsindo
RAM inoda simba kuti ishande, saka ruzivo rwakachengetwa mu RAM runodzimwa nekukurumidza kana komputa yadzimwa. Nekudaro, inozivikanwa zvakare se Kurangarira Kwakadzikama kana Kuchengetedza Kwechinguva.
Iyo mamaboard inogona kuve nenhamba dzakasiyana dzeyeuchidzo slots, avhareji mutengi Motherboard ichave iri pakati pe2 ne4 yavo.
Kuti Dhata kana zvirongwa zviitwe pakombuta, zvinofanirwa kutakurwa mugondohwe kutanga.
Saka iyo data kana chirongwa chinotanga kuchengetwa ku hard drive ipapo kubva ku hard drive, inotakurwa yoiswa mu RAM. Kamwe kana yatakurwa, iyo CPU inogona ikozvino kuwana iyo data kana kumhanyisa chirongwa izvozvi.
Pane ruzivo rwakawanda kana dhata rinowanikwa kazhinji kazhinji kupfuura vamwe, kana ndangariro yakanyanya kuderera inogona kusakwanisa kubata data rese rinodiwa neCPU. Kana izvi zvikaitika ipapo imwe yedhata yakawandisa inochengetwa pane rakaomarara dhiraivhi kuti iripire iyo yakaderera ndangariro.
Uyezve Verenga: Chii chinonzi Windows Registry & Maitiro Acho?
Saka pachinzvimbo che data rinonanga kubva ku RAM kuenda kuCUU, rinofanira kuitora kubva ku hard drive iyo inononoka kupinda nekumhanyisa, maitiro aya anononoka kudzora komputa. Izvi zvinogona kutorwa zvirinyore nekuwedzera huwandu hwe RAM inowanikwa kuti komputa ishandise.
Mhando mbiri dzakasiyana dze RAM
i) DRAM kana Dynamic RAM
ii) SDRAM kana Synchronous DRAM
Dram ndangariro ine macapacitors, ayo akafanana nebucket diki rinochengetera magetsi, uye riri mune aya ma capacitors rinobata ruzivo. Nekuti dram ine ma capacitor anoda kuzorodzwa nemagetsi nguva dzose, haabatise chibharo kwenguva refu. Nekuti iwo ma capacitors anofanirwa kuvandudzwa zvine simba, ndipo pavanowana zita kubva. Iyi fomu yeRM tekinoroji haichisiri kushandiswa zvine mutsindo nekuda kwekuvandudzwa kweinoshanda uye nekukurumidza tekinoroji ye RAM yatichakurukura pamberi.
Iyi ndiyo tekinoroji ye RAM inoshandiswa zvakanyanya mumagetsi edu izvozvi. SDRAM zvakare ine ma capacitors akafanana neDRAM, zvisinei, iyo mutsauko pakati peSDRAM neDRAM ndiko kumhanya, iyo yekare DRAM tekinoroji inomhanya zvishoma kana kushanda asynchronously kupfuura iyo CPU, izvi zvinoita kuti yekumhanyisa kumhanyisa kusare nekuti iwo masaini haana kurongedzwa.
SDRAM inomhanya ichienderana neiyo system wachi, ndosaka ichikurumidza kupfuura DRAM. Ese mamaki akasungirirwa kune iyo system wachi yenguva-inodzorwa-nguva.
RAM yakavharirwa mubhodhi reamai muchimiro chevashandisi-vanobviswa ma module anonzi SIMMs (Imwe mu-mutsetse ndangariro mamodule) uye maDIMM (maviri mu-mutsetse memory module . Inodaidzwa kuti maDIMM nekuti ine mitsara miviri yakazvimiririra yemapini aya rimwe kudivi nepo maSIMM anongova nemutsara wemipini kudivi rimwe. Rutivi rumwe norumwe rwemuchina rine 168, 184, 240 kana 288 pini.
Iko kushandiswa kweSIMMs kwave kusisina basa sezvo ndangariro inokwanisa ye RAM yakapetwa kaviri ne DIMM .
Aya maDIMM anouya mune akasiyana ndangariro kugona, ayo anotarisana chero pakati pe128 MB kusvika 2 TB. DIMM inoshandura makumi matanhatu nemasere eData pane imwe nguva ichienzaniswa neSIMMs dzinoendesa makumi matatu nematatu eData panguva.
SDRAM yakaverengerwa pamatanho akasiyana, asi tisati tanyatsoongorora izvo, ngatinzwisise kuti ndeipi nzira yedata.
Iko kumhanya kweCPU kunoyerwa mumawachi macircule, saka mune imwe wachi kutenderera, ingave makumi matatu nematanhatu kana makumi matanhatu nematatu emadhi data anotamiswa pakati peCUU uye RAM, iko kuchinjisa kunozivikanwa senzira yedata.
Saka iyo yepamusoro iyo wachi kumhanya kweCPU iyo inokurumidza iyo komputa ichave iri.
Yakurudzirwa: 15 Matipi Ekuwedzera Komputa Yako Yekumhanyisa
Saizvozvo, kunyangwe SDRAM ine wachi yekumhanya panguva iyo kuverenga nekunyora kunogona kuitika. Saka iyo inokurumidza iyo RAM yewachi inomhanyisa iyo inokurumidza mashandiro anoitika achikwiridzira processor kuita. Izvi zvinoyerwa muhuwandu hwemasekondi aanogona kuita achiverengerwa megahertz. Saka, kana RAM yakatarwa pa1600 MHz, inoita 1.6 bhiriyoni macircuits pasekondi.
Saka, isu tinovimba izvi zvakubatsira iwe kunzwisisa kuti RAM uye akasiyana marudzi e RAM matekinoroji anoshanda.
mic haishande windows 10
facebook yekudanana app isiri kushanda
sei kubatanidza windows 10 kiyi kuicrosoft account
windows 10 ethernet haina kuwanikwa
sei kugadzirisa kurira kwedambudziko pamawindows 10
windows 10 Photo app inovhara pachayo